အပြင်သကာလိုချို အတွင်းတမာလိုခါးသောမြေခွေးလူသားများထံပေးစာ Rakhine Vs Bama FIGHT | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Did the gov’t incite the racial violence targeting the Rohingya?
Deadly Alliances Against Muslims မြန်မာသမ္မတ၊ သီရိလင်္ကာသမ္မတ၊ အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်တို့နှင့် သူတုို့ရဲ့ မဟာမိတ်တွေက အကြမ်းဖက်မှုတွေ ကျူးလွန်နေတဲ့ မွတ်စလင်မုန်းတီးရေး ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးအစွန်းရောက် အုပ်စုတွေကုို သည်းခံနေ »
အပြင်သကာလိုချို အတွင်းတမာလိုခါးသောမြေခွေးလူသားများထံပေးစာ Rakhine Vs Bama FIGHT
ခုတလော ဖေ့ဘုတ်ထက်မှာ ကျနော့်ကို ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ရခိုင်လူမျိုးကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေ တော်တော်များလာတယ်။ဘာလူမျိုးလဲမမေးနဲ့။ကုလားတွေတောင် လက်မြှောက်အရှုံးပေးထားရတဲ့လူမျိုးပါ။
တကယ်တော့ လူတစ်ယောက်ကို အုပ်စုဖွဲ့ပြီး တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုကတည်းက အဲဒီသူက သူတို့ထက် တစ်စုံတစ်ခု၊တစ်နေရာရာမှာ မုချသာနေလို့ပါ။အဲလိုပါပဲ သမိုင်းပညာသျှင်ယောင်ယောင်၊မှော်ဆရာယောင်ယောင် လုပ်ပြီး ရခိုင်သမိုင်းကို မလေ့လာ၊ရခိုင်ပြည်ကို
ကွင်းဆင်းမလေ့လာဘဲ ကြားဖူးနားဝ နားစွန်နားဖျား ကြားဖူးတာလေးနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဟုတ်လှပြီထင်၊
အစွန်းရောက် ဗမာစာရေးဆရာတွေရေးတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ပုံပြင်စာအုပ်တွေကို ဖတ်ပြီး ရခိုင်သမိုင်းကို
ရစရာမရှိအောင် အပုတ်ချ၊ရခိုင်သည် လူမျိုးမဟုတ် လို့ ပြောလိုပြောနဲ့ တိုက်ခိုက်နေကြတာဟာလည်း
ရခိုင်သမိုင်းက သူတို့ထက် အစစအရာရာ သာနေတာလို့ပါ။ဒီတော့ စိတ်ဓါတ်သိမ်ဖျင်းယုတ်ညံ့တဲ့သူတွေက
မနာလို၊အူပုတ်ပြီး သွားပုတ်လေလွင့် စော်ကားနေတာဟာ့ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။သင်တို့လူတစ်စုကို
ကျုပ်အကြံပေးချင်တာက ရခိုင်သည် လူမျိုးမဟုတ် ဒေသ နာမည်သာဖြစ်တယ်ဆိုရင် အဲဒီအကြောင်းတွေကို
တရားဝင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်၊စာတမ်းဖတ်၊ပြီးရင် သမတဆီ စာတင်၊တိုင်းရင်းသား (၁၃၅)မျိုးထဲကနေ ရခိုင်လူမျိုးကို ဆွဲဖြုတ်လိုက်။
ဟုတ်ပြီလား။ရခိုင်ခေတ်ဦး ပထမဓည၀တီခေတ်ကတည်းက ရှိလာခဲ့တဲ့
“ရခိုင်” ဆိုတဲ့ လူမျိုးနာမည်ကို လူမျိုးနာမည်မဟုတ်ပါဘူး လို့ ပြောထွက်တဲ့ ခင်များတို့ပါးစပ်တွေကို ရွှေရည်တွေလောင်းပြီး
ရွှေချထားချင်ပါရဲ့။ရခိုင်သမိုင်းကို ထုဆစ်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပညာရှင်တွေဟာ ခင်များတို့လူတစ်စုလို ဖေ့ဘုတ်ထက်
တက်ဟောင်နေတဲ့ အလုပ်မရှိအကိုင်မရှိ ကလေကချေ အုပ်ကြားမြက်ပေါက် ၁၀၉ ၁၁၀ စွမ်းအားရှင် အဖွဲ့တွေ
မဟုတ်ပါဘူး။သမိုင်းသုတေသနနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တကယ့်ကို တစ်ဖက်ကမ်းခတ်အောင် တော်တဲ့
ရခိုင်ပညာတတ်တွေ ပြုစုခဲ့တာပါ။ရခိုင်သမိုင်းပညာသျှင်တွေဖြစ်ကြတဲ ရခိုင်-မြန်မာ ပဏိတ်
ဦးဦးသာထွန်း၊့ ဦးစံသာအောင်၊ဦးစံရွှေဘု၊ဦးအောင်သာဦး၊ဦးရွေဇံ၊ဦးထွန်းရွှေခိုင် တို့လို ပညာရှိပုဂိုလ်တွေပြုစုခဲ့တာပါ။
ရခိုင်အမျိုးသား ဦးမေအောင်ဆိုရင်လည်း မြန်မာစာပေကို တစ်ခေတ်ဆန်းစေခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ရေးခဲ့တဲ့ ရခိုင်သမိုင်းဟာလည်း ခင်များတို့ မြန်မာသမိုင်းလို စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ရေးခဲ့တာမဟုတ်ပါ။
ရခိုင်ကျောက်စာ၊ပေစာ၊ခေါင်းလောင်းစာ၊ရခိုင်ဒင်္ဂါးပြား၊မြို့ဟောင်းများ၊ဘုရားပုထိုးစေတီများ စတဲ့ သမိုင်းရုပ်ကြွင်းများကို နှစ်ရှည်လများ အသေအချာ သုတေသန လုပ်ပြီးမှ ထုဆစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။
ရခိုင်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ ရခိုင်သမိုင်းစတင်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့တဲ့ ဝေါဟာရဆိုတာ
ရခိုင်ကျောက်စာတွေက သက်သေရှိပါတယ်။ရခိုင် ဆိုတာ လူမျိုးဟုတ်မဟုတ် ရခိုင်ကျောက်စာတွေကို လာလေ့လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်တယ်။ စိတ်ကူးယဉ်မြန်မာစာရေးဆရာတွေရဲ့ ရွှေသွေးဂျာနယ်အဆင့်လောက်သာရှိတဲ့ပုံပြင်တွေကိုဖတ်ပြီး အဝေးကနေ အာချောင်မနေဘဲ ရခိုင်ပြည်ကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ဆိုတာ လူမျိုးနာမည် ဟုတ်မဟုတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးခင်များတို့ကို မေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်။ ကျောက်သားပေါ်မှာ ထွင်းထုထားတဲ့ သမိုင်းအထောက်အထား(Primary Soure)နှင့်
လူပြိန်းကြိုက် အပျော်ဖတ် ၀ထုစာအုပ်ထဲက သမိုင်းအထောက်အထား ဘယ်ဟာက ပိုတိကျမလဲဆိုတာ
သေချာပြန်တွေးကြည့်ပါ။ရခိုင် ဟာ မြန်မာ(ဗမာ)တို့နှင့် ညီအစ်ကို တော်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ငါတို့
လက်ခံတယ်။ဒါပေမယ့် ခင်များတို့ မြန်မာ(ဗမာ)တွေနဲ့ အမျိုးတော်တာက တယုတ်ပြည် တိဗက်ဒေသက
တိဗက်မြန်မာတွေ ၀င်လာတော့မှ တော်တာပါ။ခေတ်ဦးရခိုင်တွေက မင်းတို့တွေ လူမဖြစ်ခင်၊တရုတ်ပြည်ရဲ့ နန်စောဘုရင်ဆီမှာ မင်းတို့တိဗက်မြန်မာတွေအနှိမ်ခံကျွန်ဘ၀နဲ့ စစ်မှုထမ်းခဲ့တဲ့ ကာလမတိုင်ခင် ဘီစီ ၃၃၂၅ ကတည်းက
ရခိုင် လူမျိုးအဖြစ် ရှင်သန်နေခဲ့တာကြာပေါ့။ခေတ်ဦးရခိုင်တွေဟာ မဇျိမဒေသ မာဂဓတိုင်းပြည်မှာ နေခဲ့တဲ့ အာရီယန်(မာဂဓ)လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။
အဲကမှ တဆင့် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကို ၀င်လာပြီး အရင်ရှိနှင့်ပြီးသော လူရိုင်း(ဒြာဗီဒီယန်)တွေကို နှိမ်နှင်းကာ
တိုင်းပြည်နိုင်ငံကိုထူထောင်ကြတယ်။အဲဒီလူရိုင်းတွေကို ခေတ်ဦးရခိုင်တွေက (RAKHASA) ဆိုပြီး ခေါ်တွင်ခဲ့သလို အဲဒီ (RAKHASA)တွေကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ရခိုင် ဟူသော ဘွဲ့အမည်နာမကို ခံယူခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး ရခိုင် ဟူသော လူမျိုးအမည်ကို ခေါ်လာတာ ဒီနေ့ထက်ထိပါပဲ။
ခင်များတို့မြန်မာတွေနဲ့ အမျိုးတော်တာက မနေ့တစ်နေ့ကမှ တော်တာပါ။ခင်များတို့နဲ့ အမျိုးမတော်ခင်ကတည်းက ရခိုင် ဟူသော ဘွဲ့နာမက ရှိခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။
အသေးစိတ် လေ့လာချင်ရင် ရခိုင်သမိုင်းတွေကို ရှာဖတ်ပါ။
နောက်တစ်ခုပြောချင်တာက ရခိုင်ပြည်မှာ ကုလားတွေကို ပိတ်လှောင်ထားတဲ့ ကိစပါ။ဒီကုလားတွေကို
ဘယ်သူတွေ့က ခေါ်သွင်းခဲ့သလဲ။အဲဒီလူတွေက ဘာလူမျိုးလဲဆိုတာ ငါမပြောလည်း မင်းတို့သိမှာပါ။
ရခိုင်ဘုရင်လက်ထက်ကတည်းက ရှိနေတာလို့ လာမငြင်းနဲ့။ရခိုင်ဘုရင်ခေတ်မှာ ဘင်္ဂလားအထိ
ပိုင်စိုးခဲ့တာလည်းမှန်တယ်။ကမန်ကုလားတွေကို ရခိုင့်ဘုရပ်တပ်မတော်မှာ လေးသည်တော်အဖြစ်ထမ်းဆောင်စေခဲ့တာလည်းမှန်တယ်။ဒါပေမယ့် အဲဒီကိန်းဂဏန်းတွေက
သောင်ဂဏန်းတောင် မပြည့်တဲ့ပမာဏပါ။အင်္ဂလိပ်တွေဟာ စည်းကမ်းပိုင်းနဲ့ စာရင်းအင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာ
အလွန်အင်မတန်တိကျတဲ့ လူမျိုးတွေပါ။အင်္ဂလိပ်လက်ထက်တုန်းက ထိုတိကျပါတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေပြုစုကောက်ယူခဲ့တဲ့ သန်းခေါင်စာရင်းမှာ ဘင်္ဂလီလူဦးရေက သုံးသောင်းခန့်ပဲရှိပါတယ်။
အဲဒီကိန်းဂဏန်းက နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ရခိုင်နဲ့ လယ်ဗယ်တန်းကိန်းဂဏန်းဖြစ်လာတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ။
ဒီအဖြေကို ဦးဏှောက်တစ်ခြမ်းသာပါတဲ့ သူတွေတောင် အဖြေထုတ်တတ်မှာပါ။မွေးလို့ ပွားလာတာပါလို့ ဆင်ခြေလာမပေးနဲ့။ရခိုင်ပြည်မှာ ရောက်နေတဲ့ဘင်္ဂလီတစ်သန်းကျော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း
ဖဆပလခေတ်ကနေ စပြီး ဒီကနေ့ထိ ခိုးသွင်းခဲ့၊ခိုးသွင်းနေတဲ့ အကျိုးဆက်ပဲ။ဘယ်သူတွေလဲမမေးနဲ့။
ဘာ့ကြောင့်သွင်းခဲ့သလဲ။(၁)ရခိုင်တွေကို ကုလားနဲ့ ရန်တိုက်ပေးပြီးရခိုင်အမျိုးသားတော်လှန်ရေးဘက်ကို မလှည့်နိုင်ရန်၊ဇောက်ချမလုပ်နိုင်ရန်၊(၂)ကုလားဆီမှ မဲဖြင့် ရခိုင်ပါတီများအား အနိုင်ယူရန်၊
(၃)ပိုက်ဆံများများယူပြီး သူဌေးဖြစ်ရန် (၄)ရခိုင်လူမျိုးကို ကုလားလွှမ်းမိုးရေးစီမံကိန်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ
ပျေက်ကွယ်သွားစေရန် ဆိုတဲ့ တစ်ချက်ခုတ်လေးချက်ပြတ်စေမည့် ယုတ်မာပက်စက်တဲ့ အကြံအစည်တွေနဲ့
သွင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ရခိုင်တွေရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ အမျိုးသားရေးတွေကို ချိုးနှိမ်ဖို့၊မောင်ဝိုင်းကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရခိုင်နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကို ပြန်မယူနိုင်ဖို့ အတွက် ရခိုင်တွေကို ကုလားနဲ့ လှည့်ပတ်ရန်တိုက်ပြီး ရခိုင်တွေကို ကုလားနဲ့ ထိန်းညှိခဲ့တာကို ညကမွေးတဲ့ ရခိုင်သူငယ်တောင်
သိတယ်။ပြောလိုက်ရင် ညီအစ်ကိုတွေပါကွာ ဆိုတဲ့ စကားလုံးလှလှလေးကို သုံးပြီး ပျားရည်နဲ့ ၀မ်းနှုတ်ထားတာ
ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ကုလားတွေကို ရခိုင်ပြည်မှာကျတော့ ပိတ်လှောင်ထားတယ်၊ပြည်မ၀င်လာတော့
ချက်ချင်း ဖမ်းတယ်။ပြီးတော့ ရခိုင်ပြည်ပြန်ပို့တယ်။ခင်များတို့ရဲ့ စေတနာတွေ၊ညီအစ်ကိုိစိတ်ဓါတ်တွေဆိုတာ
အဲဒါကိုပြောပါသလား။ခင်များတို့တွေ အမှန်တရားဘက်ကနေ ယထာဘူတကျကျစဉ်းစားကြည့်ပါ။
ဘင်္ဂလီတွေကို ရခိုင်ပြည်ကို သွင်းတုန်းကကျတော့ မဖမ်းဘူး။ရခိုင်ပြည်မှာကျတော့ လွတ်လပ်စွာ
သွားလာခွင့်၊အခြေချခွင့်ပေးထားတယ်။ရခိုင်ပြည်ကနေ ရိုးကျော်ပြီဆိုတာနဲ့ စဖမ်းပြီ။
ဘာလဲ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နယ်နိမိတ်ထဲမှာ ရခိုင်ပြည် မပါသေးဘူးလား။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကုလားဥပဒေတွေက
ရခိုင်ပြည်အတွက် မဟုတ်ဘူးလား။ခင်များတို့တွေရှင်းစမ်းပါအုံး။ရခိုင်ပြည်က ထွက်သမျှသယံဇာတတွေကိုကျတော့ ဒေသခံ ရခိုင်ပြည်သူတွေတောင် ဘာအကျိုးမှ မခံစားရဘဲ
ဗဟိုကနေ ကိုလိုနီစနစ်နဲ့ သိမ်းကျုံးယူသွား၊ဘင်္ဂလီတွေကိုကျတော့ ငါတို့ပြည်တစ်ခုတည်းမှာပဲ
ပိတ်ပေးထားတဲ့ ခင်များတို့လုပ်ရပ်က တရားမျှတမှုရှိပါသလား။သယံဇာတတွေကို ကိုလိုနီပီပီ
သိမ်းကျုံးယူတတ်ရင် ဘင်္ဂလီတွေကိုလည်း ကိုလိုနီပီပီ ဘာလို့ သိမ်းကျုံးမယူချင်ကြတာပါလဲ။
ရခိုင်ပြည်ကထွက်တဲ့ ကောင်းကျိုးသုခံတွေကိုကျတော့ မျိုဆို့ပြီး ဒင်းတို့ကိုယ်တိုင် ခေါ်သွင်းခဲ့တဲ့
ဘင်္ဂလီတွေကိုကျတော့ မယူချင်ဘူးဆိုတာ တရားပါသလား။မင်းတို့ပြောတော့ ညီအစ်ကိုတွေပါဆို။
ညီအစ်ကိုတွေဆိုရင် အစ်ကို့ပြည်မှာ ရှိနေတဲ့ ဒီဘင်္ဂလီတွေကို ခွဲတန်းကျယူသွားပါလား။
ခင်များတို့တတွေဟာ ရခိုင်-ကုလားပြသနာဖြစ်တုန်းက မဆိုစလောက်လေးပို့စ်လေးတစ်ခုတင်ပြီး ရခိုင်တွေဘက်က နာပြခဲ့တာလောက်နဲ့ ဒင်းတို့ဟာ ငါတို့ရဲ့ ကယ်တင်ရှင်လိုကျေးဇူးရှင်လို ပြောနေကြတာဟာ
သူခိုးက လူပြန်ဟစ်နေသလိုပါပဲ။စတေးတပ်လေးတစ်ခုတင်ပြီး ရခိုင်တွေကို ချစ်ပြခဲ့တဲ့မင်းတို့က ငါတို့အပေါ်
အာ့လောက် ကျေးဇူးရှိတယ်လို့ခံယူနေရင် မင်းတိုဗမာပြည်နယ်အပါအ၀င် တစ်နိုင်ငံလုံးဆီသို့
ကုလားတွေပြန့်မသွားရေးအတွက် အမ်း-ဂွ-တောင်ကုတ်လမ်း(ဗမာပြည်နယ်ဝင်ပေါက်)တွေကို နှစ်ရာစုချီပိတ်ပေးခဲ့တဲ့ ကျုပ်တို့တတွေက ခင်များတို့အပေါ် ဘယ်လောက်များတောင် ကျေးဇူးရှိမလဲ။
နှိုင်းယှဉ်လို့ကို မရတာပါ။မြင်းမိုရ်တောင်နဲ့ ဇီးစေ့လောက်ကွာဟလွန်းပါတယ်။
၂၀၁၂ အရေးအခင်းဖြစ်တုန်းက တစ်ချို့ဗမာတွေက ရခိုင်ဘက်က ပါခဲ့သလို၊တစ်ချို့ဗမာတွေက ကုလားဘက်ကပါခဲ့တယ်။တစ်ချို့က ကြားနေခဲ့တယ်။တစ်ချို့က ကုလားသေသေ၊ရခိုင်သေသေ
နှစ်မျိုးလုံး မျိုးတုန်းသွားလည်းပြီးတာပဲဆိုတဲ့ သူတွေလည်း တောင်ပုံယာပုံရှိခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်ငိုရင် ဗမာငိုရမယ် ဆိုတဲ့ စကားကို မှမထောက်ဘဲ မြန်မာတစ်ပြည်လုံးအပေါ် အနာနစ်ခံပေးဆပ်နေတဲ့
ငါတို့အပေါ် မင်းတို့ကျေးဇူးကန်းလိုက်ပုံက လွန်လွန်းပါတယ်။ပြည်မဘက်ကို ကုလားမရောက်ရေး
ဒို့အရေး ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ ပိတ်လှောင်ပေးခဲ့တဲ့ ငါတို့ကျေးဇူးကိုမှ မထောက်တဲ့မင်းတို့ကို ငါတို့ကလည်း
ထောက်နေစရာမလိုတော့ဘူး။ဒီတော့ ကုလားအားလုံး ဗမာပြည်ရောက်ရေး ဒို့အရေးဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို
အကောင်အထည်ဖော်ရလိမ့်မယ်။ဟိုတုန်းကဆို ငါတို့တွေဟာ မင်းတို့ကို ချစ်လွန်းလို့ ငါတို့လည်ပင်းကို
ငါတို့ကိုယ်တိုင် ကြိုးကွင်းစွပ်ပြီး ပြည်မ၀င်ပေါက်တွေကို ပိတ်ပေးခဲ့တယ်။ငါတို့တွေပေးဆပ်လိုက်တာက
အများကြီးပါ။ဒါပေမယ့် ပြန်ရလိုက်တာကတော့ ကျေးဇူးကန်းမှု၊စော်ကားမှု၊သူခိုးလူပြန်ဟစ်လာမှုတွေပါပဲ။
ဆိုတော့ကာ ငါတို့တွေ အရင်လို မအပါရစေနဲ့တော့။ငါတို့တွေဒီနေ့ဖွင့်ချလိုက်ရင် ကုလားနှစ်ယောက်တစ်ပိုင်းကိုတောင် အမျိုးမစောင့်နိုင်တဲ့ ခင်များတို့ဗမာပြည်နယ်
မနက်ဖန် ဖာ ဖြစ်သွားမယ် လဲ ဆိုတာ သေချာစဉ်းစားထားပါ။မင်းတို့အားလုံးရဲ့ အနာဂတ်နှင့်
ဗမာလူမျိုးမပျောက်ရေး ဟာ ငါတို့လက်ထဲမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါ။ငါတို့တွေဖွင့်ချတော့မှ
ငရံ့ဆားလူးသလို တွန့်လိမ်မနေကြနဲ့။ခုမှလာပြီး ကြောက်သလိုလို၊လန့်လာသလိုလို ဘာဘာညာညာအမူအရာတွေ လာလုပ်မပြနဲ့တော့။အစကတည်းက မင်းတို့တွေလိမ်မာခဲ့ရင် ဒီလို
ဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူး။မင်းတို့ဆီကို ၀င်လာမှာကြောက်သလို ငါတို့ဆီကို ၀င်လာတုန်းကလည်း
အာ့သလို ကြောက်ခဲ့မှာပါလားဆိုတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်၊ငါတို့တွေ ဒီလောက်စိတ်ပူနေရင် ကုလားကြားမှာ
ညှပ်နေတဲ့ သူတို့ခမျာ ဘယ်လောက်ထိစိတ်ပူမလဲဆိုတဲ့ စာနာစိတ်ကလေး မင်းတို့ဆီမှာ တစ်စက်ကလေးမှ မရှိခဲ့တာ ခုတော့ မျက်ဝါးဝါးထင်ထင်သိခဲ့ရပြီ။ညီအစ်ကိုတွေပါကွာ ဘာညာဆိုပြီးနောက်တစ်ကြိ်မ် ပျားရည်နဲ့ လာပြီး ၀မ်းမချနဲ့တော့။မရတော့ဘူး။နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသား ဘင်္ဂလီတွေကိုလည်း ရခိုင်ပြည်မှာ ပိတ်လှောင်ထားတာဟာ တကယ်တော့ ရခိုင်ရော ဘင်္ဂလီတွေအပေါ်မှာပါ ဗမာတွေ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ ခုချိန်ကစပြီး နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသားကုလားအားလုံး
တစ်နိုင်ငံလုံး လွတ်လပ်စွာအခြေချသွားလာခွင့်ရရေး ရခိုင့်အရေး၊နိုင်ငံသားမဖြစ်သေးသော ကုလားများကိုလည်း နည်းမျိုးစုံဖြင့် ပို့ဆောင်ရေး ရခိုင့်အရေး ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို မဖော်ချင်ဘဲ
ဖော်ရလိမ့်မယ်။အလှည့်ကျရင် မနွဲ့စတမ်းပေါ့ဗျာ။ဒီတစ်ခါတော့ ခင်များတို့အလှည့်။
မှတ်ချက်။ ။ရခိုင်လူမျုိုးအတွက် ခွဲထွက်တယ်ဆိုစကားက မှားတယ်။ခွဲထွက်တယ်ဆိုတာ နိုင်ငံတစ်ခုတည်းက ခွဲထွက်တာ။ရခိုင်နိုင်ငံနဲ့ ဗမာနိုင်ငံဟာ အစကတည်းက သီးခြားစီပဲ။တစ်နိုင်ငံတည်းမဟုတ်ခဲ့ဘူး။ကဘာ့မြေပုံမှာ
ပြန်ရှာကြည့်။သမိုင်းအထောက်အတွေလည်း တစ်ပုံကြီးရှိတယ်။ဒါတောင် မင်းတို့အယုတ်ကောင်တွေ
ဖျက်ဆီးထားလို့။အာ့တော့ ငါတို့က ခွဲထွက်တာမဟုတ်ဘူး။ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ မဟာရခိုင့်နိုင်ငံတော်ကြီး၏
လွတ်လပ်ရေးကို ပြန်လည် အကောင်အထည်ဖော်တာပဲဖြစ်တယ်။
Khun Min Thant ရခိုင်နိုင်ငံသား – အဲလိုဆို ဘီလူး လို့ခေါ်တဲ့လူရိုင်းတွေကို မင်းတို့က ဘီစီ ၃၃၂၅ မတိုင်မီက ရှင်းထုတ်ခဲ့တာလား – မင်းရေးထားတာကို ငါမေးတာနော်
Ko Yoe ရှစ်သောင်းဘုရား ပုထိုးတော်ကြီးဒါယကာ ဘုရင် မင်းဘာလက်ထက်ကတည်းက ရခိုင်ထဲ ကုလားတွေစိမ့်ဝင်နေတာကို ဘာလို့မပြောတာပါလိမ့် ???????????ဟက်ဟက်ဟက်
Day Zar Lung All Our Arakanese Brothers and Sisters, we don’t need to care other people jealous. We should start to do our duty to retake our our own identity in this world. We are not people without history. We have great history. But now we have lost our greatness under the hand of colony. We must try with our best to get interest for our Arakanese people.
No need to care about the people who jealous on us and hate Arakanese People. We know the people who hate and jealous on our Arakanese People. We should need to do our own job. No need to care other people. Just to do for our Arakanese People at first. Just to do for our unity to work for our Arakanese Nation.
Nay Ye khun Min thsnt မင်းတိုလို ဘုရားခိုး မဟုတ်ဘူး မှတ်ထားလိုက် ခွေးကောင် မင်းက ခွေးမှာတောင်မှ ခွေးသူတောင်စား ပါကွာ
Mo Jo ခိုးတာမဟုတ်၊ပေါ်တင်ကိုယူသွားတာ၊မင်းတို့စစ်ဆုံးတော့မင်းတို့မှတန်ဖိုးရှိတဲ့ဟာဘာမှမရှိ၊အာတာကြောင့်ဘုရာကိုယူလာတာ၊လိုချင်လာပြန်တိုက်ယူ၊စစ်ဆုံးသဘောက်ကျွန်တွေ
Day Zar Lung ရခိုင် ဒေသနဲ့ပတ်ကက်ပြီး Argyre. Arakha. Arakan, Arakhaing, Rakahine ဆိုပြီး အေဒီ ၁ ရာစု ကေ န ကမ္ဘာ့မြေပုံမှာ အစဉ်အဆက် မှတ် တမ်းဝင ခဲ့တာ သမိုင်းဆရာ တွေ သိပါတယ်။
Mo Jo ကဗ္မောဇသာကီနန်းတော်ကြီးကိုမီးရှို့ သွားတာဘယ်လူမျိုးခွေးသားတွေလဲ။နန်တော်မျက်နှာကျက်ရွှေပြားတွေယူသွားတာဘယ်ခွေးသူခိုးလူမျိုးတွေလဲ။
Day Zar Lung ကိုယ့် အမေ ကို ကိုယ် ပြန်ယူ တာ စုက္ကတေး မင်း မဟုတ်လား
ကို ခိုင် မိုးည Mojoခေါ် မြေခွေးမြေးလေး ကမ္ဘောဇသာဒီနန်းတော်ရဲ့ မူလပိုင်ရှင်ဟာ ဘယ်လူမျိုးလဲ။ ဘယ်လူမျိုးက ကျူးကျော်ခဲ့တာလဲ။ကံမ္ဘောဇသာဒီနန်းတော်ကို ရခိုင်တွေမီးချို့ခဲ့တယ်ဆိုတာ မင်းမှာ ဘာအထောက်ထားရှိလဲ။ ဒဲဒီက ယူခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ရွှေတွေ ဘယ်မှာဘယ်လိုသုံးခဲ့လဲ။ ငနွားမင်းမှာသက်သေရှိရင်ပြော။ရခိုင်တွေကို မုန်းလို့ရအောင်လီဆည်ရေးခဲ့တဲ့ သမိုင်းကိုဖတ်ပြီး ရယ်စရာလာပြေနေတယ်။ရခိုင်နန်တော်ကို မီးချို့ခဲ့တာ မင်းပထွေးငယုတ်တွေဘဲ။ရခိုင်နန်းတော်က ကြေးတွေနဲ့ သွန်းလုပ်ထားတဲ့ခေါင်းလောင်း ခုထိရှိနေတုန်းဘဲ။ငနွားmojoမင်းပြောတဲ့ ရခိုင်မီးချို့ခဲ့တယ်ဆိုတာ သက်သေအထောက်ထား ဘယ်မှာလဲ ?
Khun Min Thant လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်(၄၀၀၀) မှာ အဲ့အနွယ်တွေ စ၀င်ရောက်လာတာလေ။ အဲ့ဒါကို မင်းတို့က ဘီစီ ၃၃၂၅ မတိုင်မီကတည်းက ရခိုင်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ လူရီစရာကြီးပေါ့ကွာ ပြီးတော့လည်း AD 50 က မှတ်တမ်းတစောင်မှာလည်း ကမ်းခြေမှာ လူမည်းတွေနေတယ်လို့ပါတယ်။ ရွှီးတယ်ဆိုလည်း ကြည့်ကျက်ရွှီး လူရီအောင် မရွှီးနဲ့ ။ ငါဒီမှာ ရီနေရတယ် ဟာဟ
Day Zar Lung အနော် ရထာ အမေကို အနောရထာ အစ်ကို က ယူ တာ သိလာ။ ညီသား ယောက် ဖ ဆို တာ သူတို ဗမာ အမျိုး တွေမှာ ခုထိ ရှိတယ်။
Phyo Min San လူမျိုးဆင်းသက်လာပုံသမိုင်းကိုတော့ ဆရာကြီးလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ရေးကြတယ် .. သူတို့အမေတွေကို အရေးကြီးတွေ ဘယ်နှစ်ကောင်ချခဲ့လို့ ချခဲ့မှန်းမသိဘူး .. အဲဒါကကိုများ မျိုးစစ်တယ်လဲ ဘာလဲနဲ့ ခွီးမှပဲ
Phyo Min San အော် မင်းတို့တွေတောင် သောက်ရှက်မရှိ ပြူသမိုင်းကို ခိုးသေးတာပဲကွာ လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကတော့ ရိုငင်ညာတွေအတိုင်းပဲ Phyo Min San ဘယ်တူ့ကို အဖေခေါ်ရမလဲဂျာ .. အမေက ပန်ဦးဆက်ထားတော့ ဂွပဲ ခွိခွီ
ရခိုင်နိုင်ငံ သား မင်းတို့ ဟံသာဝတီကို သိမ်းချင်လို့သိမ်းခဲ့တာမှမဟုတ်တာ။တောင်ငူဘုရင်အကူအညီတောင်းလို့ ရခိုင်ဘုရင် မင်းရာဇာကြီးက စေတနာနဲ့ကူတိုက်ပေးခဲ့တာ။စေတနာကို မစော်ကားပါနဲ့ကွာ။အာ့တော့ ငါတို့လာမပြောနဲ့။မင်းတို့ရဲ့ တောင်ငူဘုရင်ကို သွားပြော။မွဲပြာကျနေတဲ့ ဟံသာဝတီကလည်း ဘာအဖိုးတန် ပစ္စည်းမှ မယူခဲ့ပါဘူး။ဟံသာဝတီဘုရင်ရဲ့သမီးတော် ကိုတော့ ပဏ္ဏာအဖြစ် ဆက်သလိုက်လို့ အပျင်းပြေ ဆော့ဖို့ယူလာခဲ့တယ်။ပြီးတော့စစ်ကူတိုက်ပေးတာကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ တောင်ငူဘုရင်ဆက်သလိုတဲ့ ယိုးဒယားကြေးရုပ်ကြီးတွေကိုတော့ယူခဲ့တယ်။ကျန်တာ ဘာမှဘမယူခဲ့ဘူး။အာ့ကြေးရုပ်တွေက ခု မန္တလေးက မဟာမုနိဘုရားမှာရှိတယ်။စားစရာတောင် အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ ဟံသာဝတီကနေ ဘာပစ္စည်းမှ မယူခဲ့ပါဘူးဗျာ။ သမိုင်းပြန်ဖတ်လိုက်စမ်း ဟေ့ခွေးတွေ
ရခိုင်နိုင်ငံ သား ရခိုင်ကတစ်ဆင့် မန္တလေးယူသွားတဲ့ အဲဒီကြေးရုပ်တွေကို မင်းတို့ဗခွီးယုတ်တွေ ဘာလုပ်တယ်မှတ်လဲ။အာ့အရုပ်တွေရဲ့ ချက်ကိုလက်နှိပ်ပြီး မိမိခန္ဓာက်ုယ်မှာ ပွတ်လိမ်းရင် သက်ရှည်ကျန်းမာအနာရောဂါကင်းတယ်ဆိုတဲ့ အယူသီးမှုတွေနဲ့ အလုအယက်ပွတ်နေကြတာ လူမြင်လို့တောင်မကောင်းပေါင် ။အော် ဗခွီးတွေ ဗခွီးတွေ တော်တော့်ကို ဟာသလုပ်တတ်တဲ့ သူတွေပါပဲလား
Nay Ye Mo jo မင်းတို့က ဘုရားမှမမြင်ဖူးတာ ကိုယ့်ယူမဲ မိန်းမကိုတောင်မှ သူများနဲ အိပ်ပြီးမှ ယူရတဲအမျိုး တွေပဲ ကွာ ကိုးကွယ်တာ တောင်မှ အဲကောင်ကြီးကို ကိုးကွယ်ကြတဲလူမျိုးတွေပဲ ဘယ်ကအသိတရား ရှိမှာလဲ ကွာ
This entry was posted on October 18, 2014 at 3:14 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.